Ngwaọrụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Otu esi choputa shọvel snow: Atụmatụ na aghụghọ
Na mmalite nke oyi, ọ dị mkpa mgbe ọ bụla iji kpochapụ snow: na mbara ụlọ nke onwe, na nso ụlọ ụgbọala, na okpukpu okpukpu, n'ihu ụlọ ahịa ya. Ma ọ bụrụ na shọvel ahụ na-ezighị ezi, usoro a nwere ike ịbụ ezigbo ihe ịma aka nye gị. Ya mere, ọ bara uru ka ị nwee ike ịbịakwute nhọrọ nke snowplow, isiokwu a ga-enyere gị aka na nke a.
Otu esi eji ma lekọta uzo aka
Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-arụ ọrụ ugbo na-eji aka aka. A na eji ya maka ahịhịa mowing maka hay, nri ụmụ anụmanụ, na-eme ka lawn dị. Maka nchebe na ogologo oge, ọ dị mkpa ịmara otú ị ga-esi gbanye ma lekọta aka na aka aka. Ngwaọrụ na ihe ndị bụ isi Ihe ntuziaka ntuziaka na - agụnye: mma, kosovishche, aka, obere osisi na mgbanaka.
Anyị na-ahọrọ screwdriver: njirisi nhọrọ
Mkpa ọ dị ịrụ obere ọrụ ụlọ dị iche iche na-ebili ugboro ugboro, na ngwaọrụ ọkụ eletrik, bụ nke na-aga n'ihu, na-akwado usoro a. Otu n'ime ngwá ọrụ ndị a, dochie ugwu nke ndị na-enweghị isi na-enweghị isi, bụ screwdriver. O nwere ike inye aka ngwa ngwa ma ghara itinye mgbalị iji rụọ ọrụ n'ime ụlọ, nyocha anyị na njirimara ndị dị mma nke "onye inyeaka" dị otú ahụ ga-eme ka nhọrọ dị mma na ịzụta ya.
Esi mee ka shọvel snoo n'ụlọ
Ọtụtụ ndị na-aṅụrị ọṅụ mgbe oyi na-acha ọcha na-acha ọcha. Ọ bụ ezie na ịma mma na mbara ala oyi na-eweta mmụọ dị elu, oge a jikọtara ya na nsogbu ndị ọzọ: mgbe snow dara oke, ọ na-eme ka o sie ike ịkwaga n'ámá ma hapụ ụgbọala ahụ site na ụgbọala. Ọzọkwa, a pụrụ igbochi snow n'ọnụ ụzọ ụlọ.
Akụkụ nke iji traktị T-150 na ọrụ ugbo
Nkọwa nke eluigwe na ala nduku iche iche n'oge niile - "Tuscany"
Tomato "Pink Elephant": àgwà, akuku na ilekọta
Palm Dracaena na-enweghị atụ Gwakọtara dị ka ụlọ mma
Nri mkpụrụ vaịn "Sphinx"
Ọgwụgwọ na ụzọ dị irè iji luso rubella mkpụrụ vaịn
Ihe nzuzo nke "mgbọrọgwụ" na-ewu ewu: gịnị bụ ginger na ebee ka ọ na-etolite?
Nchegbu banyere ahụike nke nwa: kabeeji n'oge ị na-ara nwa